basic-kubernetes Archives - Kubernetes World
Story Tag: basic-kubernetes
Introduction to Kubernetes. Kubernetes ဆိုသည်မှာ Open Source system… | by simon | Jul, 2021 | Medium simonsuum.medium.com
Stories Tag: basic-kubernetes
Introduction to Kubernetes. Kubernetes ဆိုသည်မှာ Open Source system… | by simon | Jul, 2021 | Medium
Kubernetes ဆိုသည်မှာ Open Source system ဖြစ်ပြီး၊ Containers များကို ထိန်းကျောင်းမောင်းနှင်ပေးနိုင်သော Controller/Management Unit ဖြစ်သည်၊ Container Orchestrator ဟုလည်းခေါ် သည်။ Container Orchestrator ဆိုသည်မှာ cluster လုပ်ထားသော system group အတွင်းရှိ container များကို deploying, managing, fault-tolerant နဲ့ scalable စသော နည်းပညာများဖြင့် automatically မောင်းနှင်ပေးသည်။ Container ဆိုသည်မှာ application တစ်ခုအတွက် လိုအပ်သော libraries, frameworks နဲ့ အခြားလိုအပ်သော dependencies များကို Package ထုပ်ပိုးပေးထားပြီး၊ အဆိုပါ application ကိုသီးခြား Isolated ဖြစ်သော Environment တစ်ခုကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ Keubernetes ဆိုသည်မှာGreek ဘာသာစကား κυβερνήτης မှဆင်းသက်လာပြီး helmsman or ship pilot…